CV CV 40 mahavariana hapetraka | Famoronana an-tserasera
Ny Curriculum Vitae an'ny mpamorona sary dia mety ho liana amin'ny zava-misy horesahina tahaka antsika na izay haintsika atao dia tsy mila mampiasa ny teny voasoratra ho toy ny fiara isika, raha ny tena izy ny famolavolana ny resume dia mety mihoatra ny fampahalalana fotsiny ary afaka manome famantarana maro momba izay karazana mpamorona sy mpiasa tena misy antsika. Noho izany ny maha-zava-dehibe ny fananana CV voalohany mba hisarika ny saina.
Ny marina dia ny ankamaroan'ny ankamaroantsika izay manolo-tena amin'ny sehatra mamorona indrindra (na mpamorona, mpamorona votoaty, mpanoratra na mpanakanto hita maso) dia maniry ny ho afaka ampiasao toy ny «canvas» ny tohinay, satria tsy isalasalana fa matoky izahay fa tena anay tokoa io curriculum vitae Ny marina dia ho marina sy marina, angamba mihoatra ny anaran'ny ivon-toerana ianarantsika na eny amin'ireo orinasa iasantsika aza.
Indraindray isika dia niresaka momba ny famolavolana ny tenantsika, zavatra iray izay ataonay mifanentana amin'ny famolavolana ny asan'ny matihanina. Ity famolavolana asa maha-olona na asa ity dia misy ifandraisany amin'ny zavatra maro. Ny fombanay raha ny amin'ny asa, ny fironana tsy maintsy safidintsika palety miloko iray amin'ny asantsika, ny fahaizanao, ny toetranao ary ny resume anao ary koa ny portfolio-nao. Ny vahaolana mety indrindra hamolavolana endrika tsara izay tena misy ihany koa dia ny fiarahan-kevitra sy ny taratry ny tsirairay avy. Hisafidy ny fatra amin'ny fahaiza-mamorona na ny fombantsika izay tiana hapetraka ao amin'ny fandaharam-pianarana tany am-boalohany isika ary noho izany dia hanana herimpo sy risika izaitsizy isika. Milaza aho fa mampidi-doza satria tena mila mianatra mahay mamantatra mialoha ihany koa isika amin'ny toe-javatra sasany ary indrindra amin'ny mpifanerasera sasany. Na dia toa tsy mampino aza izany, orinasa maro mitady olona hameno ny fahabangan-toerana amin'ny toerana mpamorona ary mitaky fahitana faran'izay betsaka dia mandà an'io karazana CV tany am-boalohany io. Hisy hadalana lehibe kokoa ve eto amin'ity tontolo ity? Eny tokoa, saingy tsy dia lavitra loatra.
Ny marina dia raha mijanona mamakafaka azy tsara isika dia manana ny fanazavany sy ny fiadian-kevitra mety. Voalohany indrindra, tsy maintsy tadidintsika fa ny mpandray dia tsy mila matihanina tsara indrindra ary avelao aho hanazava. Rehefa mila manana matihanina tsara indrindra ianao dia mila azy, fa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy azonao atao izany. Matetika aho no miteny satria betsaka ny SME sy ny orinasa salantsalany, koa raha manapa-kevitra ny handefa asa kanto isaky ny averina any amin'ny orinasa kely na salantsalany ianao, dia azo inoana fa "matahotra ireo tompon'andraikitra amin'ny zon'olombelona "ary mieritreritra fa tsy ho azon'izy ireo atao ny mandoa izay mendrika anao (tsara, saika ho izany foana no izy, nefa hoy izy raharaha hafa) Ka vahaolana famoronana sy mahafinaritra toy izany indraindray mety hanjary tsy hamokatra izy ireo. Amin'ireto karazana toe-javatra ireto, izay ho maro an'isa, ianao dia tokony hisafidy vahaolana mahazatra kokoa, izay tsy tokony ho antonony ary eto aho hiresaka aminao momba ireo karazana vahaolana ireo satria ireo no mahomby indrindra amin'ny tanjona azo ampiharina. .
1 Ireo CV tany am-boalohany tsara indrindra alaina
1.1 Avereno ny xiruxiru
1.2 Rei's Resume nataon'i Rei-pash
1.3 Tohizo amin'ny zxcxvxc
1.4 Tohizo amin'ny brazilnut
1.5 Tohiny ara-nofo nataon'i mac1388
1.6 Ny tohiny farany nataoko tamin'ny pixelprop
1.7 Ny tohin'i darthkix
1.8 Tohizo amin'i cheektocheek
1.9 Avereno avy amin'i KevinPire
1.10 Avereno avy amin'i Kyuzengi
1.11 Tohizo amin'i heydani
1.12 Avereno ny fanavaozana ny mac1388
1.13 Avereno havaozina amin'ny twolapdesigns
1.14 icART averin'i icasialnrdy
1.15 Tohin'ny Akashrine
1.16 Avereno ny Espanol avy amin'i rogaziano
1.17 Tohizo amin'ny bdechantal
1.18 Tohin'ny fandaharam-pianarana nataon'i toromuco
1.19 Tohizo amin'i puziah
1.20 Personal Resume 2010 nataon'i heeeeman
1.21 Avereno ny WIP avy amin'i AchisutoShinzo
1.22 Avereno avy amin'ny ILICarrieDoll
1.23 Server Resume nataon'i rkaponm
1.24 Ny tohin'i Littlearashi
1.25 Avereno avy amin'i LordGabsta
1.26 Tohizo amin'ny alàlan'ny spen
1.27 Ny nahaterahan'ny tohiko avy amin'i NoviceXyooj
1.28 Tohizo amin'ny alàlan'ny tenisety folo
1.29 Creative Resume Fanontana Voalohany nataon'i NikonD50
1.30 Ny tohin'ny Designer-ko taloha an'i ExtremeJuvenile
1.31 Curriculum Vitae avy amin'i arbrenoir
1.32 Ny Resume vaovao avy amin'ny Living2prove
1.33 CV avy amin'i Verine
1.34 CV nohavaozina tamin'ny xchingx
1.35 CV avy amin'i Giemax
1.36 CV an'i Johnnywall
1.37 Ny famerenako mamorona an'i liagiannjezreel
1.38 Ny fandaharam-pianarako avy amin'i flaterie
1.39 CV Tudor Deleanu avy amin'i iTudor
1.40 Adam Balazy CV avy amin'i Balazy
Ireo CV tany am-boalohany tsara indrindra alaina
Ireto ambany ireto dia te-hizara safidin'ireo tsy misy hafa ary tsy misy kely noho ny Ohatra cv tany am-boalohany 40 Azontsika atao ny mampifanaraka ny mombamomba antsika. Na dia mety hampidi-doza loatra aza ny sasany amin'izy ireo dia azonao ampiasaina foana izy ireo mba hanome aingam-panahy ary hanampy ny sasany amin'ny toetrany amin'ny CV anao tany am-boalohany:
Ny voankazo dia misy heviny manokana eto ary manome ny maha-izy azy, ny fahamaitaizana ary saika ny tanora amin'ity tolo-kevitra mahaliana ity momba ny vita vita tamin'ny fandaharam-pianarana tany am-boalohany
Rei's Resume by Rei pash
Amin'ity ohatra ity dia ampiasaina ho toy ny loharanom-pahalalana ny temotra mba hanomezana tendro ny hakantony sy ny fahaiza-mamorona ny endrika.
CV by zxcxcxc
Ny famafazana loko dia angamba iray amin'ireo marika faratampon'ny fahalalahana mamorona.
CV by voanjo brazil
Ity ohatra ity dia mampiseho firafitra iray izay mampiasa tsipika sy logo faran'izay tsara.
Famerenana typographic by mac1388
Ny filalaovana litera sy endritsoratra dia mety hanome valiny tena tsara ihany koa.
Ny tohiko farany nataon'i pixel prop
Afisy mampatahotra ho tolo-kevitra ho an'ny resume. Mahagaga!
Ny tohiny by darthkix
Famintinana sary miaraka amin'ny silhouette an'ny maherifo sy ny marika fanazavana sasany.
CV by cheektocheek
Tolo-kevitra tena manintona miaraka amin'ny nuances ny pop art ary angamba ny fomba Retro.
Indraindray ny fanaovana loko tsara sy ny endriny tsara dia ampy noho izay.
Ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny tsipika dia afaka manome valiny mahaliana toy ity ohatra ity.
Azontsika atao ihany koa ny mampiasa silhouette izay miaraka amina endritsoratra sy tsy fitoviana mety hanome valiny lehibe.
Avereno ny fanavaozana by mac1388
Ny fampahalalana rehetra dia miompana amina vondrona litera, miaraka amin'ny topy maso dia azontsika atao ny mahazo ny fampahalalana rehetra.
Avereno havaozina by twolapdesigns
Ity misy ohatra tsara iray izay mifangaro tsara ny loko, ny silhouette, ny rafitra tsy mitovy ary ny litera.
icART mamintina by icasialnrdy
Ny fampidirana sary tsara dia afaka manampy trotraka ny laoniny amin'ny laoniny, indrindra raha sary maneho tsara antsika izany.
Indraindray ny biby dia mitaratra ampahany manokana amin'ny toetrantsika. Amin'ity ohatra ity dia milalao silhouette an'ny squirrel isika.
Resume Espaniola by rogaziana
Ny fifangaroan'ny loko dia tsy voatery hahena ho singa haingon-trano, afaka mamorona fitambarana tsara koa isika eo anelanelan'ny lahatsoratra, sary ary endrika.
Indraindray isika dia afaka mampiasa vahaolana mahazatra na mahonon-tena kokoa, saingy tsy noho izany antony izany no tsy dia mamorona vahaolana.
Tohin'ny fandaharam-pianarana by toromuco
Azontsika atao ny mampiditra sary kely ary mampiasa azy ireo hilalao lalao miaraka amin'izy ireo.
Ny haitao, ny firafitra ary ny sary dia afaka miasa tsara raha haintsika ny mampifandray azy ireo amin'ny sary manokana.
Resume manokana 2010 by heeeeman
Ny infographic dia afaka maneho tsara ny tanjatsika sy ny fahaizantsika.
Fintino ny WIP by AchisutoShinzo
Eto izahay dia mahita sari-tany metro, isaky ny fijanonana dia ho hitanao ny angona momba ilay mahery fo.
Afaka manome fikitika tena manokana sy mahafinaritra izahay amin'ny alàlan'ny fampidirana toerana akaiky toy ny latabatra fiasana.
Mitohy ny serivera by rkaponm
Ny endritsoratra nosoratana tanana dia afaka manome kabary somary akaiky kokoa sy mamorona toa ity ohatra ity.
Miaraka amin'ny typiface serif sy ny grunge dia afaka mahazo vokatra azo ekena isika.
Ny kisarisary sy ny fanoharana dia afaka maneho tsara ny fombantsika, na dia tsy maintsy mahay mifidy tsara azy ireo aza isika.
Ary ity misy infographic iray hafa miaraka amina fitambarana loko mahaliana.
Ny nahaterahan'ny tohiko avy amin'i NoviceXyooj
Ny fijery atsinanana dia afaka manome valiny kanto kokoa ho an'ny resume.
CV by biscuit tennis
Amin'ity ohatra ity dia hitantsika ny fomba nampiharana singa toy ny sary, braces, alokaloka ary endritsoratra isan-karazany.
Creative Resume Fanontana Voalohany by nikond50
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo safidiko tiako indrindra. Resema gradien radial miaraka amina lohateny sy sary fisaka.
Ny tohin'ny mpamorona taloha nataoko nataon'i ExtremeJuvenile
Ny fomba amam-panao sariitatra dia afaka manome mpiorina fanampiny amin'ny rivotra sy fahatanorana.
Eto izahay dia mahita fandaharam-pianarana tena kanto izay manararaotra ny halalin'ny ranomasina mba hanambarana ny angona.
Ny Resume vaovao by velona2 manaporofo
Sary miaraka amina tabilao sy singa misy pie amin'ny endrika sary an-tsary.
Fandaharam-pianarana izay mifototra amin'ny fampiasana loko izay mandrafitra ny rafitra CMYK, mety amin'ny mpamorona sary.
Ireo singa fitsapana amin'ny fototra mainty. Safidy mahaliana ary azo antoka fa ao anatin'ny CV tany am-boalohany izay tadiavinay.
Azontsika atao ny mampiasa rafitra boribory hampifangaro azy ireo amin'ireo singa marindrano izay manome haitraitra fanampiny.
Ny fanovana ny fahatsapana aseho ny endritsoratra dia afaka manome dikany fanampiny.
Ny famerenako ny famoronana by ligiannjezreel
Ity misy ohatra iray hafa izay miditra amin'ny CV tany am-boalohany, tena manokana miaraka amin'ny sary sy ny fampiasana fontsoratra tanana.
Ny fandaharam-pianarako avy amin'i flaterie
Indraindray ny vahaolana tsotra sy madio dia mety ahitana singa mamorona. Ity misy ohatra iray.
CV Tudor Deleanu avy amin'i iTudor
Ny fampiasana paleta miloko Pantone dia mety ho marika mahomby raha mpamorona sary ianao.
Taratasy grunge, sary fisaka ary olo-malaza amin'ny sariitatra.
Ahoana ny hevitrao momba ity fifantenana tsara indrindra ity CV tany am-boalohany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » CV tany am-boalohany
echi23 dia hoy izy:
tena tsara daholo .... mamelombelona ny fomba fijery be izy ireo
Valio i echi23
Tsara tsara tsara !!! Tiako izy ireo !!!
Bridge dia hoy izy:
Fabuleusa Inamome avy amin'i Alana sy Sinjexa miaraka amin'i Brado Daras. riamo aramoss sy fratuico amegimo misy dolulo mitahiry!
Mamaly an'i Bridge
aiza no ahitako tutorial hanaovako azy
Famintinana tena tsara, nahazo hevitra tena tsara aho ho an'ny famolavolana ny ho avy indray!
Katherine Salinas-Mendoza dia hoy izy:
Antsoin'izy ireo ity maodelin'ny fandaharam-pianarana ity, izay nahita zavatra adaladala toy izany, mahatsiravina sy mahatsikaiky ... fandaharam-pianarana, ha!
Valiny tamin'i Katherine Salinas Mendoza
ajanony ny famakiana ny fiainana, mahazoa fahalalana vitsivitsy ary avotsory ny ati-dohanao
Hoy i Sooo tsara. Hitanao fa tsy mahalala famolavolana ity ramatoa ity ary manana ny heviny. Ao anatin'ireto famerenana ireto dia misy dingana manan-danja amin'ny famoronana sy ny asa ary ny fahamarinana milaza fa tsy tiako ity noho ny filazako azy dia avy amin'ny olona tsy manam-pahalalana sy tsy matotra. Miarahaba anao!
Juan p dia hoy izy:
tsy fantatrao namana, tokony ho mpisolovava kaonty na zavatra avy amin'ny birao ianao satria tsy fantatrao
Mamaly an'i juan p
Jrsp1 dia hoy izy:
Katherine, ny kolontsaina sary, ny fahaiza-mamorona ary ny faharanitan-tsainao dia mampiseho zavatra betsaka.
Ny fandaharam-pianarana amin'ny plural dia: Curricula.
Ny zeta an'ny hadalana dia miharihary amin'ny tsy fisiany.
Ilay mampihomehy ... anao irery.
Valiny tamin'i Jrsp1
Rogelio Cuervo Zarate White dia hoy izy:
Izaho dia mitovy hevitra amin'izany.
Valiny tamin'i Rogelio Cuervo Zarate Blanco
Marihina fa tsy mahalala na inona na inona momba ny famoronana sy ny faharanitan-tsaina ...
Toa tsy dia matotra loatra i Katherine raha ny fahitako azy ...
Tena manavao ireo tohiny ireo, saingy maro amin'izy ireo no zara raha vakiana. Nahita famerenana zava-baovao maro sy namboarina mahavariana aho, izay azo vakiana tsara. Tsy haiko hoe manao ahoana ny fizotry ny fisafidianana eo amin'ny tontolonao, fa ny fomba andefasanao ny tohiny any amin'ny orinasa izay tsy noforonina manokana sy ny mpanafika HR. hitovy amin'ny faritra hafa amin'ny orinasa (sekretera, fitantanana, fizotra, injeniera, ...) ny antsasak'ireo CV ireo dia tsy hanana vintana, satria ny mpiasa dia tsy handany fotoana hamoahana ny vaovao.
Raha milaza izy ireo etsy ambony, tena mamelombelona izy ireo, saingy mahafinaritra ny mihantona amin'ny rindrina, fa tsy mamaky ao anatiny.
Yuri Luis Medina Barrios dia hoy izy:
Farafahakeliny 30% amin'ireo ohatra no vita tsara… ny sisa mbola maitso.
Valiny tamin'i Yuri Luis Medina Barrios
misy ny sasany tsy misy mihitsy .. zaraiko ny hevitr'i Luis Medina
Handz valentin dia hoy izy:
Ireny resume mavitrika ireny dia toa mahaliana. Tsara ho an'ny mpanavao sy mpamorona… na izany aza, nahita orinasa "matotra" niondrika tamin'ireny CV vaovao ireny aho.
Mamaly an'i Handz Valentin
Silvia Vera Laceiras dia hoy izy:
genial !!!! tena manome aingam-panahy ahy izy ireo
Valiny tamin'i Silvia Vera Laceiras
Ny CV dia mety ho tena izy araka ny itiavanao azy, raha ny marina, izy rehetra dia manaparitaka asa famolavolana maro sy ora maro, saingy heveriko fa tsy tokony hohadinointsika hoe iza no mitantana azy io (Human Resources of the orinasa, izay amin'ny farany ireo misafidy, manadihady ary manakarama na tsia) ary inona ny fampahalalana ampitainay. Ny sary marika dia tsy vitan'ny famolavolana tsara fotsiny, fa mila manome hafatra kalitao koa ianao. Miarahaba antsika rehetra
raquel1@hotmail.com dia hoy izy:
Heveriko fa ny famerenana marobe marobe izay natao dia tsy mamolavola ny fahamatorana tokony homen'izy ireo, ny sasany aza toa takelaka takelaka na zavatra toa izany.
lanyuan dia hoy izy:
ny tohiny dia misaotra betsaka arahaba soa
Mamaly an'i lanyuan